विज्ञहरु भन्छन्, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्ध सुधारौं भन्नु नै नाकाबन्दीप्रति माफी माग्नु हो !::Nepal's No.1 Genuine Online News Portal
विज्ञहरु भन्छन्, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्ध सुधारौं भन्नु नै नाकाबन्दीप्रति माफी माग्नु हो !
प्रकाशित मिति - आइतवार, बैशाख ३०, २०७५
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि जनकपुर आइपुगेका छन् । तीन वर्षअघि नेपालको संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएको भारतले नेपालमा नयाँ जनादेश सहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालको संविधानमाथि टिप्पणी गर्न छोडेको छ ।
नाकाबन्दी छिचोलेर अघि बढेको नेपालमा ब्यापक जनमत सहितको सरकार बनेपछि मोदी नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने बाटोमा अग्रसर छन् । सोही क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केहि समयअघि भारतको राजकीय भ्रमण गरे भने त्यसैको दोस्रो श्रृंखलाको रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा छन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला त्यसप्रति मौन समर्थन गर्ने एउटा तप्का भने यतिबेला नाकाबन्दीको दुःख भोग्ने नेपालीको भावना भड्काउन उद्यत छ । नाकाबन्दीप्रति समर्थन तर, नाकाबन्दीबाट पछाडि फर्केर सम्बन्ध सुधार गर्नुलाई उक्त तप्काले विरोध गरिरहेको छ । नाकाबन्दीको मार ब्यहोरेका नेपाली नागरिकलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा उक्त तप्काले भावना भड्काउन प्रयोग गरिरहेको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणका विषयमा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुसँग चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले कुराकानी गरी तयार पारेको सामग्री–
मोदीको भ्रमण, सुखद सम्बन्धको सुरुवात
नीलाम्बर आचार्य, कूटनीतिज्ञ
मोदीको नेपाल भ्रमणको पहिलो सन्देश भनेकै दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार हो । हिजो जे भयो अब त्यस त्यसले परेको अप्ठ्यारो हटाउने र यसअघि भएका विकास साझेदारी सम्बन्धि सम्झौताहरु समयमै कार्यन्यनका लागि जोड दिने काम गर्नुपर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले केहि समयअघि भारत भ्रमण गर्नुभयो । त्यसैगरी हाम्रा प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ । दुई देशका सरकार प्रमुखको यो भ्रमण आदानप्राद समानतामा आधारित सुखद् सम्बन्धको आधारविन्दु हो ।
विगतमा नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी गर्दा दुःखेको घाउ अझै पुरिएको छैन । त्यो कालखण्ड साँच्चै नेपालीको मनमा कहिल्यै नपुरिने घाउ बनिसकेको छ । त्यसै कारण पनि अहिले त्यो दुखद् जनभावना समाजिक संजालमा पोखिएको देखिन्छ । तर मोदीजीको नेपाल भ्रमण भनेकै त्यहि तिक्तता मेटाउने प्रयास हो । नयाँ र सुखद् सम्बन्धको सुरुवात हो ।
जहाँसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री जनकपुरमा किन आउनुभयो भन्ने प्रश्न छ, भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपालसँगको साझा आस्था र साझा मान्यताको जो हिन्दु छ त्यो धर्मसँग पनि जोडिएको छ । त्यसलाई दर्शाउन खोजेको रुपमा मैले लिएको छु । यो सबै प्रयास नेपाल र नेपाली प्रति म नजिक छु भनेर देखाउनु नै हो ।
मोदी भ्रमणको रौनक जनकपुरमा मात्र छ भन्ने कुरा स्वाभाविक नै हो । जुन ठाउँमा भ्रमण हुने हो त्यो ठाउँमा तयारी गर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । हो, काठमाडौं आएर गएको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ तर हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यससँग जोडिएको जनकपुरमा पूजा गर्न खोज्नुलाई हामीले गलत बुझ्नु हुँदैन ।
मोदीको जनकपुर यात्रालाई प्रदेशको भ्रमण भन्न मिल्दैन । देश भित्रैको प्रदेश भए पनि देशकै मान्छे त्यहाँ जुट्ने हो । सरकारका तर्फबाट वरिष्ठ मन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा स्वागत गर्नुहुनेछ । एउटा पाहुना बोलाएर आतिथ्यमा कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । त्यसमाथि पनि सरकारले त गर्नै हुँदैन । त्यो हाम्रो संस्कारमा पर्दैन । नाकाबन्दीको तिक्तता छ म मान्छु, तर त्यो नाकाबन्दीका बेलाको तिक्तता हो । जव सम्बन्ध सुधारौं भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ तव तिक्ततालाई बिर्सेर सकारात्मक सम्बन्धको थालनी गर्नुपर्छ । हामी छिमेकी त फेर्न सक्दैनौं । त्यसैले सम्बन्ध धारमा राखेर होइन यसलाई आफू अनुकुल बनाउँदै लैजानु पर्छ । र सरकारले पनि त्यहि गरेको हो । दुई देशबीच समानता, हाम्रो सर्वभौमिकतामा आंच आउने काम भयो भने मात्र हामीले औंला उठाउने हो, सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँ भनेर अघि बढ्दा नकारत्मक रुपमा लिनु हुँदैन ।
पुराना तिक्तताबाट पाठ सिकेर सम्बन्ध सुधारतिर जाँदै
राजन भट्टराई, कूटनीतिज्ञ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले दक्षिण यसियाका सबैजसो छिमेकी देशहरुसँग सम्बन्ध सुधरमा सक्रिय हुनुहुन्छ । त्यहि सम्बन्ध सुधार अन्तर्गत नेपाल उच्च प्राथमिकतामा छ । यसलाई हामीले गलत रुपमा लिनु हुँदैन । यो भ्रमणबाट उहाँ नेपालसँगको तिक्तता मेटाउने योजनामा हुनुहुन्छ । हिजो नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुभयो । त्यसैको निरन्तरतामा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भइरहेको हो ।
यो भ्रमणमा के कुरा उठ्लान् भन्ने सन्दर्भमा प्रश्न अवश्य छन् तर हामीले ऐतिहासिक कालखण्ड देखिका समस्या समाधान गर्न भनी इपिजी गठन गरेका छौं । त्यसैले धेरै कुराको सम्बोधन गरेको छ । इपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्त्य अन्त्यतिर पुर्याएको छ । विगतमा भएका सन्धि सम्झौताबारे किन कुरा उठेन वा सीमाका समस्या लगायत विषयमा किन कुरा उठेन भन्ने होइन । ती विषय इपिजी बैठकमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्दैछन् र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भोलि दुई देशका सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन् । त्यसले पुराना सन्धि सम्झौता, सीमा समस्या लगायतका विषयमा समाधान गर्नेछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिनन्दन किन गर्ने भन्ने अहिलेको सवाल नै होइन । यो सामान्य कुटनैतिक प्रचलन हो । औपचारिक सम्बन्धमा आउँदा न्युनतम रुपमा साथ दिनुपर्छ । नागरिक अभिनन्दन गर्ने र नगरप्रमुखले साँचो बुझउने कुरा यो पहिल्यै देखिको परम्परा हो ।
हामीले नाकान्दी भोग्यौ । त्यो दुःखद कालखण्ड हाम्रो मनमा मात्र हैन इतिहासमै लेखिइसक्यो । त्यो कति अन्यथा थियो शब्दमा ब्यक्त गर्न सकिन्न । तर त्यहि कुराबाट पाठ सिक्दै अघि त बढ्नु पर्छ नै एउटा राष्ट प्रमुखले । त्यहि कुरा यो सरकारले पनि गर्दैछ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री किन जनकपुर पहिले आउनुभयो भन्ने प्रश्न नै गलत छ । यहाँ मात्र हैन विश्वभर नै यो ट्रेन छ । भरर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग राजधानी बेइजिङमा भेटवार्ता भयो त ? पछिल्लो पटक संसारभरका राष्ट्र प्रमुखहरुका भ्रमण हेर्नुभयो भने सबै सहायक शहरहरुमा भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रप्रमुख अमेरिका भ्रमण जाँदा बासिङटन नगइ फर्किए । सी जिनपिङ भारत भ्रमण जाँदा पनि गुजरातबाटै दिल्ली नगई फर्किए । यसलाई अन्यथा नलिउँ, यो विषय नै होइन ।
नाकाबन्दीको विरोध नगर्ने, सम्बन्ध सुधारको विरोध गर्ने तरिका ठीक छैन
शंकर शर्मा, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष
मोदीको नेपाल भ्रमण सम्बन्ध सुधारको अर्को चरण हो । सम्बन्ध सुधार हुनु सम्बन्ध बिग्रनु भन्दा राम्रो कुरा हो । तर यो बेला नेपालले फाइदा लिन सक्नु पर्छ । हाम्रा समस्या थोरै छैनन् । तर जति सकिन्छ सम्बन्ध राम्रो भएकै बेलामा उठाउनु पर्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नाकाबन्दी गरेर गल्ती गरेकाले माफी माग्नु पर्ने भन्ने बिषयमा चाहिँ मेरो फरक बुझाइ छ । मोदी बोल्न चतुर छन्, उनले बोल्न पनि सक्छन् । तर, के हामीलाई माफी भन्ने शब्द चाहिएको हो त ? गल्ती गरेको माफी शब्द भन्दा पनि ब्यावहारमा देखिनु पर्छ ।
हामीले जति गाली गरे पनि छिमेकी फेर्न सकिन्न । हिजो नाकाबन्दी गरेको बेला किन गरिस् भन्न पनि नसक्ने अनि आजसम्बन्ध सुधार गर्दा पनि नराम्रो लाग्ने ? दुबै कुरा गलत हुन् । हिजो किन नाकाबन्दी गरेको भन्ने प्रश्न गर्नै पथ्र्याे, त्यसबेलाको सरकारले गर्यो । अहिले सम्बन्ध सुधार्नै पर्ने छ, सुधार हुँदैछ । हिजोको गलतलाई विरोध नगर्नेले अहिलेको सहीलाई विरोध गर्नु ठीक होइन । मोदीको यो सम्बन्ध सुधार भ्रमणबाट फाइदा लिनु पर्छ ।
सम्बन्ध सुधार्छु भन्नु नै नाकाबन्दी प्रतिको माफी हो
लालबाबु यादव, पूर्व सांसद, प्राध्यापक
मोदीकै पालामा नेपालमा नाकाबन्दी भएर मोदी नै फेरि नेपाल आउनु भनेको नै सम्बन्ध सुधारको लागि हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । होइन भने मैले जे गरे तँलाई ठिक थियो भनेर नेपाल नआउन सक्नुहुन्थ्यो नेपाल त्यसमा पनि धार्मिक स्थलकै भ्रमण गर्नु भनेको मुखले नभने पनि यो क्षमा याचना नै हो भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालमा मात्र हैन नाकाबन्दीले भारतमा पनि ठूलो क्षति भएको छ ब्यापारमा । नेपालको १७ खर्ब घाटा छ भने भारतले पनि ३७ खर्ब घाटा बेहोरेको छ । नाकाबन्दीको विरोध त त्यहिँ पनि भएको थियो । त्यहाँका जनता पनि नाकाबन्दी लगाउने सरकारसँग रुष्ट थिए । हिजो पनि म भारतको मिडियाबाट आएको अन्तरवार्ता सुन्दैथिएँ । त्यहाँ जनस्तरबाट पनि, इन्टलेक्चुअलबाट पनि नाबाबन्दी गरेर नेपालसँग सम्बन्ध विगारेको भन्दै विरोध भएको छ । यो कुरा नेता देखि जनतासम्म फिलिङ भएको छ । त्यसले सम्बन्ध सुधार र क्षमाको लागि मोदी नेपाल आएका हुन् ।
नेपालले आउन लागेका पाहुना लाई तँ नआइज भन्न सकिंदैन । त्यो कुटनीतिले दिंदैन । सरकारलाई पनि त्यसको स्वांङ नगर भन्न मिल्दैन । हामीले पहुनाको स्वाग त गर्नैपर्छ । तर यो भ्रमणपछि नेपालको मामलामा भारत कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो भने हामीले वाच गरिरहेकै छौं, गर्नेछौं ।
-चक्रपथ डटकमबाट साभार गरिएको